ब्रेकिङ: सिन्धुली र काभ्रेको सिमानामा गाडी दुर्घट्ना, ३ को घट्नास्थलमै मृत्यु - Pardeshi Khabar
ब्रेकिङ: सिन्धुली र काभ्रेको सिमानामा गाडी दुर्घट्ना, ३ को घट्नास्थलमै मृत्यु
Post by: परदेशी खबर प्रकाशीत मिति: October 5, 2019
काभ्रे । सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका र काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाको सिमानामा बस दुर्घट्ना भएकोछ । दिउँसो करिब १ बजे काठमाडौंबाट रिजर्भमा लगिएको गाडी उक्त स्थानमा दुर्घट्ना भएको तेमाल गाउँपालिका वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामाले जानकारी दिएको हो ।
दुर्घट्नामा परि ३ जनाको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष लामाले बताए । करिब ३५ जना घाइते हुनसक्ने लामाले अनुमन लगाएकाछन् । बा ३ ख २३ ५९ नं. को उक्त बस काठमाडौंबाट विराटनगर जाने क्रममा अनियन्त्रित भई दुर्घट्ना भएको बुझिएको छ । तेलाम अनलाइनले यो खबर प्रकाशित गरेका छन ।
अहिले नेपालथोक प्रहरी चौकी र मंगलटार इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उद्धार गरिरहेको मंगलटार इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख इन्पेक्टर धर्मजंग थिङले जानकारी दिए । ‘के कति क्षति भयो र के कारणले दुर्घट्ना भयो थाहा पाउन सकेको छैन ।’ इन्सपेक्टर थिङले भने, ‘उद्धार र विवरण संकलन गर्ने क्रममै छौं ।’
मृतक र घाइतेहरुको पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै छ ।
« रोशनीले दिइन् महराविरुद्ध बलात्कार प्रयासको उजुरी (Previous News)
(Next News) कुवेतमा मुन्द्रे र जीवन शर्माको साथ मुन्द्रे एण्ड शर्मा शो सम्पन्न »